DEPIOTE HARIJAONA RANDRIARIAMALALA : Hiara-dia sy hampandany ny kandidà Andry Rajoelina n°13
Tapa-kevitra. 11 octobre 2018
Hanatevin-daharana ireo efa mijoro fa hanohana sy vonona hampandany ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 ihany koa ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy teny Atsimon-drano, Harijaona Randri-arimalala na i Jaona Elite. Vonona ny hanohana tsy misy fepetra ary tsy misy takalony an’ity kandidà ity ny tenany.
Manao tohy vakana hatrany ny fanambaràna milaza ny fanohanana sy ny fampandaniana ny kandidà Andry Rajoelina. Fikambanana tsotra, antoko politika sy olom-boafidy maro no efa vonona tanteraka ny hiara-dia amin’ny kandidà laharana faha-13. Omaly no nanao fanambaràna nanampy isa azy ireo ihany koa ny solombavambahoaka voafidy teny Atsimondrano, Harijaona Randriarimalala. Nambarany fa resy lahatra tanteraka amin’ny fahamatoran’ireo vinam-pampandrosoana izay volavolain’ity kandidà ity ao anatin’ny IEM ny tenany. “Iarahantsika mahalala fa misy kandidà miisa 36 hilatsa-kofidiana, midika izany fa tsy maintsy misy iray amin’ireo no hosafidian’ny vahoaka Malagasy hitondra sy hitantana ny firenena.
Rehefa nijery izahay, namakafaka ary nandinika amin’ny vina sy amin’ny fahavononana hitondrana an’i Madagasikara satria ny fitantanana ny firenena dia ilaina traikefa. Araka izany dia resy lahatra izahay amin’ny vina izay nataon’ny kandidà iray dia tsy iza izany fa i Andry Nirina Rajoelina na ny kandidà laharana faha-13”, hoy ny depiote Jaona Elite raha nanao fanambaràna omaly. Nambarany fa fampandrosoana matotra no tena ilain’ireo vahoaka eny amin’ny faritra Atsimondrano izay iadidiany kanefa ny fitondrana teo aloha dia tsy nahavita izany. Ny kandidà Andry Rajoelina no hitany ho manana fahavononana hampandroso an’i Madagasikara izay hita taratra ao anatin’ilay boky nosoratany.
Fampandrosoana maro, hoy hatrany ny depiote Jaona Elite, no azo antoka fa ho vitan’ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 raha tsy hilaza fotsiny an’ireo karazana fotodrafitrasa tena ilain’ny vahoaka toy ny toho-drano sy ny lalana. “Ny kandidà laharana faha-13 no hitako fa manana ny fahavononana hampandroso an’i Madagasikara ary namaky ny boky izay nosoratany ny tenako ary hitako fa ao anatin’io boky io dia maneho fa afaka mampandroso haingana an’i Madagasikara raha tsy hiteny fotsiny aho ny any Atsimondrano satria voaresaka ireo fotodrafitrasa tena ilain’ny vahoaka”, hoy hatrany izy. Tsy tambo isaina intsony ankehitriny ireo resy lahatra amin’ny vinam-pampandrosoana IEM nataon’ny kandidà Andry Rajoelina. Vina matotra ary miantraika avy hatrany amin’ny andavanandrom-piainan’ny vahoaka Malagasy.
DEPIOTE HARIJAONA RANDRIARIAMALALA
2018-10-11 12:05:47 par tsito rabe
antsika jiaby efa roso ny aminy fanohanana any prezida ANR sy ny vinany IEM !!miara mientana isika antsimondrano hifidy ny numero 13